Tonga Lafatra Hatezerana 'Andriamanitra — Trip LEE - OFISIALY SITE
Ity misy toriteny vao haingana no nitory ny Salamo 95:10-11. My 3 hevitra tsotra:
I. Fahotana mampahasaro ny Hatezerana
II. Ny fahotana dia Alernate Path
III. Fahotana miaro antsika amin'ny fitsaharan'Andriamanitra
Mivavaka aho izany dia mampahery anao
Rebecca Abbey Iiams • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:09 aho • navalin'i
Ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandoham-pahalalana, Fa ny adala manamavo ny fahendrena sy ny fananarana. Prov. 1:7 — Misaotra be dia be noho ny fampaherezana.
K.C. McElroy • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:09 aho • navalin'i
Great rahalahy fampianarana. Hatanjaho hatrany ny amin'i Kristy rehefa manampy ny hafa hitombo. TAHIN'ANDRIAMANITRA.
Derek Lane • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:10 aho • navalin'i
mahagaga hafatra. Tohizo ny hamela Azy hampiasa anao!
vahiny • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:10 aho • navalin'i
Raha fahatezerana andriamanitra efa nesorina avy amintsika amin 'ny ran' i Kristy, no mbola tokony hatahotra an'Andriamanitra (Ohab 1:7) Ary raha izany inona no tokony hatahotra momba azy?
Jeremydaniel95 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:10 aho • navalin'i
toy ny hendry ahy
Yanks7375 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:11 aho • navalin'i
tena hafatra tena tsara isika rehetra manana olana fa tahaka ahy foana ny ady